(4 Tips) Indlela Ukubhala Isincoko ngokugqibeleleyo?
A kuqamba omkhulu kufuneka olu phawu luhleli ngale; kufuneka kutsala umaleko layo ngeenxa zonke kuthi, kodwa kufuneka umaleko uguqulela thina wayengaphumi "
Ukwakheka binzana liye ngokusekelwe elithi waseJamani 'essayer' elithetha "ukuvavanya" okanye "ukuzama". An sihloko apha, umzamo etsomo aqonde imeko, towards amandla inkulu umbhali kwaye uchaze. Kokuqamba sisincoko enamandla kunye nentsingiselo gqolo ukuba ngomnye iimfihlelo ezininzi zehlabathi yemfundo kaThixo umdla. Nangona uluhlu isincoko kakhulu, kufuphi infinity, ke kungaba ku iparameter lonyango okanye elisekwe ukulinganisa ukomelela inqaku. A ukwakheka ingaba yonke kunye nantoni na enokwenza acacise ngokupheleleyo kwaye nixoxe ngesihloko iqinisekisiwe. ababukeli isincoko ingadodobaliseka kubizwa ngokuba ultimate jaji ukuze ufumanise, indlela okukhulu nqaku. Ukubunjwa benifanele ukuba igcwaliswe ngaphambile ukuze imeko ethile engabonakaliswa nguwo nge uluhlu ecacicleyo iimbono, ngendlela enokwenza ukugcina iinkcukacha kwaye ukwazi kwi ngesitya eyodwa. Zonke mabinzana kunye namabinzana evulelwe sihloko kumele ukuba lwenziwe ngendlela sikhokelo eqhelekileyo ngokupheleleyo, ukunika abaphulaphuli ukuhlolisisa ngenyameko iingcinga kunye nenkqubo, kwakunye kwezinye iimeko, kumelwe ukuba ube ukulungele ukufumana ikhaya indawo.
Ngokuqinisekileyo ezingasenza izikhokelo ezininzi kunye neendlela ukudala isincoko olusebenzayo nangona kungekho indlela esekwe okanye kuvavanywa ukudala isincoko enkulu. Ziliqela ngabo
ifundwe: UKWANDA kokunganamtheli WOKWAMKELWA KUSETYENZISWA IINKONZO FAL Yesiko UKUBHALA
1. Ukwazi isihloko
Oku ngenene phakathi into ebalulekileyo xa ebhala inqaku ukuze siqwalasele. Yintoni le nto isihloko? kufuneka ibe yintoni nokwakheka malunga? Ezi izinto kufuneka isisombululo elungisiweyo usebenzisa umbhali, ngubani oza ukudala inqaku. Ngaphandle Ukwazi kanye ukuqondwa isihloko, bani iyibeke ibinzana ngaphakathi inqaku. Lo mba isihloko kufanele ukuba zihlalutywe ngocoselelo phezu phambi kokuba uqalise ukusebenzisa nokwakheka, nekhaya-ngeziphumo emalunga naloo mba ufanele ukuba equlethwe ingqondo yakho. Wena uyakwazi ukukholwa ngokukhuselekileyo ukuba umsebenzi isiqingatha kuyaqhubeka ukuba ugqibile kanye le nto ngeenxa.
2. Kujoliswe market: Imbetha bull's-eye
Kufanele ukuba ugcine engqondweni yakho imarike lesincoko phambi kokuba uqalise uhambo wakha i isincoko ngempumelelo. ekwakhiweni iya ungakhangela apho uhlobo yemarike? Yintoni injongo esi sincoko ukuba? Nawuphi na umbhali benifanele ukuba sikulungele ukuphendula le nkxalabo. Kanye xa kwisincoko sele evulelwe seli yokungena ngenxa ezininzi zoshishino-school, nokuqiqa kwaye iingcebiso ngaphakathi isincoko ufanele ukuba umfanekiso ngendlela, leyo kangcono ukuchaza-akhawunti ithemba kaThixo ngaphakathi uluhlu nokwakheka
3. kuqamba Great ibonisa iingcamango lifutshane kwaye kucacile
Oku ngokungathandabuzekiyo nkcazelo edibana isincoko xa. A kuqamba omkhulu nje sikhokelo bekumnandi ukuba siqonde, amabinzana ziya kwazi ukubona, kwanabancinane ngeendlela apho ngokwenene kumnandi ukuya abaphulaphuli. ozibonayo kwakhona iingcinga simelwe ukuba ngokuqhelekileyo ziboniswe kwi ngendlela ezifanelekileyo. Ezi mpawu kumele ukuba ifakwe ngaphakathi umbhali ukuba babe nako ukuvelisa ukwakhiwa efezekileyo
ifundwe: BEST TIPS SEARCH JOB kunye nezimvo abafundi iziqu
4. Ukwenza uyilo: qala it!
Ekuqaliseni idrafti isincoko xa ngokwenene njengoko ndiwufezile umsebenzi yonke kubalulekile. Kuba waphawula izihlandlo ezininzi i-inyathelo lokuqala ukuze ukwakheka iba umsebenzi elikhulu ngenxa yokuba abaqalayo. Umbhali kunokwenzeka kufuneka uqale nje inkqubo lokushicilela, akukho ukukhathazeka okanye ukuqonda xa umsebenzi wokwenza inqaku kuye kwagqitywa. Xa i-idrafti yokuqala iyaqhubeka ukuveliswa, inkqubo ukuba ngoobani kunye nazo ilungiselwe ezantsi, ukulungele ukuba akhululwe ukuba uhlelo lokugqibela.
UKWANDA kokunganamtheli WOKWAMKELWA KUSETYENZISWA IINKONZO FAL Yesiko UKUBHALA
BEST TIPS SEARCH JOB kunye nezimvo abafundi iziqu
INDLELA ukufumana ABABHALI FAL MFUNDO?
« KUFUNEKA YAZI IZIKHOKELO COLLEGE YOKWAMKELWA MBA abanqwenelayo ukufumana
IMIXHOLO INQAKU FOR yezemfundo »